Aqoonkaab Wiil Africa udhashey oo madaxweyne ka noqday waddanka aduunka ugu awood badan. Waxkastaa waa suura gal. | Aqoonkaab
Wiil Africa udhashey oo madaxweyne ka noqday waddanka aduunka ugu awood badan. Waxkastaa waa suura gal.
Jun 27, 2016Arrimaha bulshada
Barack Obama waa madaxweynaha 44aad ee wadanka maraykanka. sido kale wuxuu ku guulaystay abaalmarinta nabada aduunka 2009. wuxuu sameeyey taarikh 2008 markuu ku guulaystay doorashadii madaxweyne ee U.S. wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyeyee african ah ee maraykanku yeesho.obama karaamadiisa,caqliga wanaagsan,iyo hadaladiisa awooda badani waxay ka dhigeen mid aad ucaana wadanka maraykanka gudihiisa. wuxuu aad uguulastay fariintiisii isbadalka.
Obama wuxuu ku dhashey Hawaii sanadki 1961 waxaa iska dhalay aabo modow oo kiinyan ah iyo hooyo cad oo ameerican ah. waalidkii ways fureen intaa kadib hooyadii waxay guursatay nin indonesian ah. qoyska Barack wuxuu u guuray indonesia 1967. wuxuu dugsi ka dhiganaayey Jakarta ilaa uu ka gaadhey 10sanno, markuu ku soo laabtay Hawaii. Obama wuxuu bartay culuumta siyaasada iyo xidhiidhka caalamiga ah jaamacadda Columbia University ee magaalada New york. Kadib afar sano uu ku sugnaa magaalada New york, OBama wuxuu uguuray Chicago. wuxuu maamule ka ahaa mashruuc bulsheed kasoo socday Saddex sanno 1985-1988.wuxuu galay Jaamacadda Harvard qaybta sharciga isagoo noqday madaxwaynihii ugu horeeyey afican ah ee qaybta sharciga iyo qanuunka. wuxuu sharciga ka bartay jaamacadda Chicago law School 12sanno.
wuxuu xubin ka noqday Aqalka duqaytida ee maraykanka 2004.
wuxuu tageeray sharciga ilaalinta tamarta,socdaalka iyo hogaaminta daacada ah. Sharciga maraykanku wuxuu dhigayaa in muwaadinkasta oo maraykan ah noqonkoro madaxwayne isla markaana laba jeer xafiiska utartami karo sidaaso ay tahay madaxwayne obama wuxuu laba jeer ku guulastay inuu noqdo madaxwaynaha dalka aduunka ugu awooda badan dadka reer mareeykan waxay ku xasuusan donaan obama hoos udhigidii shaqala’aanta koruqaadidii dhaqaalaha iyo cidhibtirka xididada argagixisada waxay maraykanku uyaqanaan.
Waxaa diyaariyey Bilaal Axmed Cige (Tixraac)
Previous PostMastering Linux Network Administration Next Postka feejignoow Dilaaga koowaad ee Ragga